I-PSL ihlongoza impesheni yabadlali | News24
I-PSL ihlongoza impesheni yabadlali
Durban - UDkt Irvin "Iron Duke" Khoza onguSihlalo wePSL umemezele ukuthi bazobhunga emhlanganweni weBoard of Governors (BOG) ngombono wokuthi kuthathwe ingxenye ethile yemali yokusayina kwabadlali ifakwe esikhwameni sempesheni yabo.
UKhoza usho lokhu emcimbini wokugubha iminyaka eli-10 iSuperSport TV ishade nePSL obungoMgqibelo ebusuku eSandton Convention Centre, eGoli.
UMike Makaab oyimenenja yabadlali abaningi abagijima kuleli naphesheya, utshele ILANGA ukuthi lo mbono kaKhoza uwuseka ngokugcwele.
Uthi uzosiza abadlali ukuphila impilo engcono nxa sebebeke amakhokho ethala, hhayi eyobumpabanga.
"Kumele ishayelwe elikhulu ihlombe iPSL ngalo mbono. Kwamanye amazwe njengaseBelgium kuvele sekuqalile ukwenzeka kokufanayo. Nokho kuleliya lizwe umdlali uyithola imali uma eseneminyaka yobudala engaphezulu kwengama-35 futhi intela kayibanjwa kule mali okuyinto esiza umdlali.
OLUNYE UDABA:Baningi abazodinga impesheni - Gordhan
"Abadlali kumele bakujabulele lokhu, kuzobasiza kakhulu. Isikhathi esiningi abadlali bafuna imali yabo esandleni ukuze bayibhubhudle bengakavuthwa emqondweni. Lokhu kuzokwehlisa umthwalo nakithina njengezimenenja zabadlali esibhekela ikusasa labo."
Uthi iPSL kumele iwuphasise ngokushesha lo mbono.
UHareipha "Simba" Marumo obenguMengameli weSouth African Football Players Union (Safpu) uhambe emazwini kaMakaab. Ubonge uKhoza ngokubona ukubaluleka kwalesi sikhwama.
No winners in Saturday's Daily Lotto jackpot draw 13 minutes ago Click here for the full list of lottery results